Muraayadda Apple Watch ion-X oo tijaabada la saaray [fiidiyow] | Wararka IPhone
Muraayadda Apple Watch ee ion-X oo tijaabada la saaray [fiidiyow]
Pablo Aparicio | | Apple Watch
In yar oo ka badan 48 saacadood ee ugu horreeya Apple Watch si ay u gaarto milkiilayaashooda, ayaa ku wareegaya shabakadda mid ka mid ah fiidiyowyo aad ku arki karto sida ay aalad ugu qaldan yihiin ama, sida kiiskan, qayb ka mid ah. Qalabka la doortay, sidee buu noqon karaa haddii kale, waa Apple Watch. Si ka sii macquul ah, muraayadda ay kori doonaan smartwatches-ka kuwa ka socda Cupertino waa nooca Sport-kooda.
Apple waxaa lagu soo daray iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus oo ah muraayad cusub oo ay ku baabtiisay sida galaaska ion-X. Madaradani, dadka qaar, waa heer Gorilla Glass 3, laakiin way ka fog tahay joogitaanka dusha sare ee Gorilla Glass 4, oo horeyba ugu yimid Galaxy S6, ama, maadaama uusan cidina shaki ka qabin, ka fog iska caabbinta xoqida safayr, muraayad lagu qaadi doono moodello leh a qiimaha sare sida ay yihiin. Qaabka Watch iyo nooca Edition. Su’aashu waxay tahay, intee in le’eg ayuu muraayadda Apple Watch Sport sii jiri doonaa?
Waxay umuuqataa taasi Lewis hilsenteger, oo si fiican loogu yaqaan Qalabka Daaweynta Qalabka, ayaa jawaabteeda leh. Kuwa idinka mid ah oo aan garanaynin cidda uu yahay, hubaal haddii aan kuu sheego inuu isagu ahaa kii bilaabay "albaabka" u dambeeya ee ka dhanka ah Apple, waxaan ula jeedaa #BendGate, waad ogaan doontaa cidda ay tahay. Si loo ogaado, sidee bay noqon kartaa haddii kale, ku jirdilo muraayada Apple Watch waxyaabo ay ka mid yihiin fure, mindi ama warqad ciid ah.
Sida aad ku aragto fiidiyowga oo madax u ah qoraalkan, oo haddii aadan arkin oo aadan rabin inaan natiijada ka soo baxo, jooji akhriska, el kareemku wuxuu u adkaystaa sida xayawaanka duurjoogta ah labada dharbaaxo oo leh fure iyo "mindi" mindi. Si daacadnimo ah, kamaan filaynin in muraayaddani iska caabido labadan xaaladood ee xaaladda u sii gudbinaya xagga ugu sarreeya.
Laakiin waxaa jira imtixaan saddexaad iyo afaraad oo ah kan indha sarcaadiyaha iyo kan warqadda ciida. Imtixaanka indha indheeyaashu sidoo kale wuu dhaafaa laakiin, sidee bay noqon kartaa haddii kale, warqadda ciida waxay kaga tagaysaa muraayadda xaalad aad u xun. Tijaabadan seddexaad waa kiis aad u xun oo uusan isticmaale uusan gaari doonin, sidaa darteed waxaan u maleynayaa inaan xasillooni buuxda ku qabeyno in muraayada Apple Watch Sport ay u adkeysan doonto isticmaalka caadiga ah iyo xitaa wax yar "guud".
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Muraayadda Apple Watch ee ion-X oo tijaabada la saaray [fiidiyow]
samee 7 sano
Si daacadnimo ah, saacaddu waa maxay waxay mudan tahay waa khiyaano ... wax alla wixii aad xidhato.
Haa, dabcan, inaan noolaado uma baahni taleefan casri ah sidoo kale waxaan heystaa midka aan ugu jeclahay iPhone iPhone. Faalintaydu waxba ma soo kordhineyso laakiin taada midna wax kuma soo kordhinayso
Ku jawaab elpaci
Rafael Pazos sawirka meeleynta dijo
Xaasidnimadu way kaa qaadaa, kuwa ku caaya ama kuwa ku dhaleeceeya astaanta gaar ahaan IPHONE 6 iyo Apple wacth waa waxa aan arko eh? Adigoon cidna xumeyn, oo markaas ku boodaya hubkoodi oo dhan raran iyo xashiishku waxay bilaabayaan roobab… Waa faallo ah inaanan rabin inay xumaadaan, laakiin waxaan arkaa xaasidnimo, haddii aad iibsato wax qaali ah waa inaad daryeesho, aniga Waxaan haystay taleefankayga iPhone 6 tan iyo markii uu soo baxay Dabool la'aan, weligay iskama tuurin oo waa FURSAD !! Salaan !!
Jawaab ku sii Rafael Pazos
Muraayada Apple Watch Sport oo tijaabada la saaray
Sida ay Apple Watch u cabirto garaaca wadnahaaga